Webcraping Scraping: Zvakanaka Uye Zvakaipa Bhoti - Semalt Tsanangudzo
Icho chinoreva huwandu hwehuwandu hwewebsite yehusaiti inouya kubva kuIntern bots panzvimbo yevanhu. A bot is software application iyo inokonzera kushandiswa kwemabasa munzvimbo ye digital. Bhoti dzinowanzoita mabasa achidzokorora nokukurumidza uye zvisingakoshi nevanhu. Ivo ndivo vanoita mabasa maduku atinowanzoita kuti tibvumirwe, kusanganisira kutsvaga injini kurongedza, kutarisa kwehutano hwehutano, kuenzanisa nekukurumidza kwayo, simba reAAPI, uye kutora webhu hwehutano. Bhoti dzinoshandiswawo kuongedza kuongorora kwekuchengeteka uye kuongorora nzvimbo dzako kuti uwane kusagadzikana, uchigadzirisa pakarepo.
Kuongorora Kusiyana pakati pezvakanaka uye zvakashata mabhoti
Bhoti rinogona kugoverwa mumapoka maviri akasiyana, bots bots, uye bad bots. Bhogi dzakanaka dzinoshanyira nzvimbo dzako uye dzinobatsira kutsvaga injini dzinokamba mapeji akasiyana ewebhu. Semuenzaniso, Googlebot inokonzera zvakawanda mawebsite mumigumisiro yeGoogle uye inobatsira kuwana mapeji matsva ewebhu paIndaneti. Inoshandisa maitiro ekuongorora kuti ma blogs kana mawebhusayithi anofanira kutamba sei, kakawanda sei kutamba kunofanira kuitika, uye kuti mapeji akawanda akaenzaniswa sei ikozvino. Bhuku rakaipa rinokonzerwa nekuita mabasa akaipa, kusanganisira webpage scraping, comment spam , uye DDoS kurwisa. Zvinomiririra kupfuura 30 muzana yemigwagwa yese paInternet..Vaseki vanouraya mabhi akaipa uye vanoita mabasa akasiyana-siyana akaipa. Vanotarisa mamirioni kumabhiriyoni emapeji ewebhu uye vanotarisira kubira kana kuisa zvinyorwa zvisiri pamutemo. Vanopedzawo bhanji uye vanoramba vachitsvaga mapulagi uye software zvinogona kushandiswa kupindira mawebhusayithi enyu uye ma database.
Kazhinji, injini dzekutsvaga dzinoona zvinyorwa zvakagadzirwa sezvinoitwa zvinyorwa. Zvinokuvadza kutsvaga kwekutsvaga injini yako uye zviputi zvinotora ma RSS feeds kuti uwane uye upindezve zvinyorwa zvako. Vanowana mari yakawanda nemhando iyi. Zvinosuruvarisa, injini dzekutsvaga dzisina kuita chero nzira yekubvisa maitiro akaipa. Zvinoreva kana zvinyorwa zvako zvichinyorwa uye zvichinyorwa nguva dzose, nzvimbo yako yehuwandu inotariswa muvhiki shomanana. Injini dzinotsvaga dzinonongedza nzvimbo dzinenge dziine zvinyorwa zvinyorwa, uye hazvikwanisi kuona kuti webhusaiti yakatanga kudhinda chidimbu chehupenyu.
Haasi yose yekurota webhuipi yakaipa
Tinofanira kubvuma kuti kuchera hakusi kukuvadza uye kunotyisa. Inobatsira kune vashandi vepawebsite pavanenge vachida kuparadzira dhiyabhorosi kuvanhu vakawanda sezvinobvira. Semuenzaniso, nzvimbo dzehurumende uye mahofisi ekufambisa zvinopa ruzivo rwakakosha kuvanhu vose. Iyi nzira yedhadha inowanzowanika pane APIs, uye scrapers vanoshandiswa kuti vatore deta iyi. Kwete, hazvina kunaka kune webhusaiti yako. Kunyangwe paunotsvaga izvozvi, hazvizokuvadza mukurumbira webhizimisi rako rekutsvaga.
Chimwe chiitiko chekutsvaga kwechokwadi uye kwakarurama kune nzvimbo dzekutsvaga dzakadai sezvivako zvekutsvaira hotele, nzvimbo dzekateti yemakonti, uye zvinyorwa zvemashoko. Bhobho dzinokonzera kugovera zviri mumapeji aya ewebhu dzinowana dhechi kuburikidza neAAPIs uye dzinozvinyora maererano nemirayiridzo yako. Vanotarisira kuendesa motokari uye kubvisa ruzivo kune webmasters nevarimi Source .